ကေ်ာဖီနည်းပညာပေး သင်တန်းများကို ဒီဇင်ဘာလမှ မတ်လအထိ ပို့ချပေးမည်
Post byသုသု(AMIA) on Saturday, February 23,2019
လက်ရှိ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ အထူးတန်းဝင် ကော်ဖီစေ့ တန်ချိန် ၃ဝဝ ခန့်သာ တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံ- ကေဇူး(AMIA)
ကော်ဖီကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နှစ်စဉ် ကော်ဖီရာသီချိန်ဖြစ်သည့် ဒီဇင်ဘာလမှ မတ်လအထိ နည်း ပညာပေး သင်တန်းများအား သင်ကြားပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်ဖီရာသီ၊ သီးနှံဌာနခွဲမှ သိရသည်။
“ မြန်မာ့ ကော်ဖီဟာ ဈေးကွက်တန်ဝင် ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုရင် နည်းပညာပေးတာ၊ ပံ့ပိုးတာတွေ လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ ကော်ဖီထုတ်လုပ်တာနဲ့ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ကော်ဖီစိုက်ခင်းတွေ ဖြစ်လာစေဖို့ အပင်ပြုပြင် ပုံသွင်းတဲ့ နည်းပညာပေး သင်တန်းတွေ ဖွင့်လှစ်ပေးတယ် ” ဟု စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ကော်ဖီရာသီ သီးနှံဌာနခွဲ မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်ဆွေက ပြောသည်။
မြန်မာ့ကော်ဖီသည် ကမ္ဘာ့ကုန်စည်ဈေးကွက်တွင် အထူးတန်းဝင် ကော်ဖီ (Speciality Coffee) အဖြစ် ခိုင်ခိုင် မာမာ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အရည်အသွေးကောင်း ကုန်းမြင့်ကော်ဖီ အာရေးဗီးကား (Arabica) အမျိုးအစား စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ဖွံ့ဖြိုးလာရေး၊ ပမာဏ ပိုမိုတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ် နိုင်စေရေးနှင့် ရေရှည်ခိုင်မာရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် ကော်ဖီသီးနှံဌာနခွဲမှ နည်းပညာ သင်တန်းများပို့ချခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် တောင်သူများအား ကော်ဖီ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု လက်စွဲစာစောင်များ၊ စာအုပ်များ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ ကော်ဖီသုတေသနဌာနရှိ ကော်ဖီ အရည်အသွေး သတ်မှတ်နိုင်သည့် ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် မြေဆီလွှာ ဓာတ်ခွဲခန်းများအား အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကော်ဖီ လှော်စက်များအား ဝယ်ယူခြင်း၊ ဒေသခံတောင်သူများအား ကော်ဖီထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ရိတ်သိမ်းချိန် လွန် နည်းပညာများအပေါ် ကော်ဖီကြိတ်စက်ငယ်ဖြင့် လက်တွေ့သရုပ်ပြခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ က်ာဖီအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲမြင့်က “ ကျွန်တော်တို့ဆီက ကော်ဖီစေ့ကောင်းတွေ ထွက်ရှိပြီး ပြည်ပကို ကောင်းကောင်း မတင်ပို့နိုင်ဘူး။ ပြည်ပတန်းဝင် ကော်ဖီဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ် '' ဟု ပြောသည်။
ယခင်နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကော်ဖီစေ့တန်ချိန် ၈,ဝဝဝ ကျော် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ပြည်ပနိုင်ငံများ သို့ အထူးတန်းဝင် ကော်ဖီစေ့ တန်ချိန် ၃ဝဝ ခန့်သာ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရန္ကုန်၊ ဖေဖ်ာဝါရီ ၂၂
က္ဖောီကဏ္ဍ ဖြံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတြက် နွစ္စဉ် က္ဖောီရာသီခ်ိန်ျဖစ်သည့် ဒီဇင္ဘာလမွ မတ္လအထိ နည်း ပညာပေး သင္တန်းမ်ားအား သင်ကြားပို့ခ်ပေးသြားမည်ျဖစ်ကြောင်း က္ဖောီရာသီ၊ သီးနွံဌာနခြဲမွ သိရသည်။
“ျမန္မာ့ က္ဖောီဟာ စေ်းကြက္တန်ဝင်ျဖစ်နေပါပြီ။ ဒီကဏ္ဍ ဖြံ့ဖြိုးဖို့ဆိုရင် နည်းပညာပေးတာ၊ ပံ့ပိုးတာတြေ လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ က္ဖောီထုတ္လုပ္တာနဲ့ ရေရွည္တည္တံ့တဲ့ က္ဖောီစိုက္ခင်းတျြေဖစ္လာစေဖို့ အပင်ျပျုပင် ပုံသြင်းတဲ့ နည်းပညာပေး သင္တန်းတြေ ဖြင့်လွစ်ပေးတယ် ” ဟု စိုက္ပ်ိုးရေးဦးစီးဌာန က္ဖောီရာသီ သီးနွံဌာနခြဲ မွ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦျးမင့်ဆြေကျေပာသည်။
ျမန္မာ့က္ဖောီသည် ကမ္ဘာ့ကုန္စည်စေ်းကြက္တြင် အထူးတန်းဝင် က္ဖောီ (Speciality Coffee) အျဖစ် ခိုင္ခိုင် မာမာ ရရွိနိုင်ရန်အတြက် အရည်အေသြးကောင်း ကုန်ျးမင့်က္ဖောီ အာရေးဗီးကား (Arabica) အမ်ိုးအစား စိုက္ပ်ိုးထုတ္လုပ္မှု ဖြံ့ဖြိုးလာရေး၊ ပမာဏ ပိုမိုတိုျးမှင့်ထုတ္လုပ် နိုင်စေရးနွင့် ရေရွည္ခိုင္မာရေးအတြက် ဆောင်ရြက္လ်က်ရွိကြောင်း ၎င်းက ဆက္လက္ဆိုသည်။
လက်ရွိတြင် က္ဖောီသီးနွံဌာနခြဲမွ နည်းပညာ သင္တန်းမ်ားပို့ခ်ျခင်း၊ ဝန္ထမ်းမ်ားနွင့် တောင်သူမ်ားအား က္ဖောီ စိုက္ပ်ိုးထုတ္လုပ္မှု လက္စြဲစာစောင္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ာျးဖန့်ဝေပျးခင်း၊ က္ဖောီသုတေသနဌာနရွိ က္ဖောီ အရည်အေသြး သတ္မွတ္နိုင်သည့် ဓာတ္ခြဲခန်းနွင့်ျေမဆီလွှာ ဓာတ္ခြဲခန်းမ်ားအား အဆင့်ျမှင့်တင်ျခင်း၊ က္ဖောီ လွေ္စာက္မ်ားအား ဝယ်ယျူခင်း၊ ဒေသခံတောင်သူမ်ားအား က္ဖောီထုတ္လုပ္မှု လုပ်ငန်းစဉ္မ်ား၊ ရိတ်သိမ်းခ်ိန် လြန် နည်းပညာမ်ားအေပါ် က္ဖောီကြိတ္စက်ငယ်ျဖင့် လက်တြေ့သရုပ်ျပျခင်းမ်ား ဆောင်ရြက္လ်က်ရွိကြောင်း သိရသည်။
ျမန္မာနိုင်ငံ က္ဖာီအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရျဲမင့်က “ ကျြန်တ္တောို့ဆီက က္ဖောီစေ့ကောင်းတြေ ထြက်ရွိပြီျးပည္ပကို ကောင်းကောင်း မတင္ပို့နိုင္ဘူး။ျပည္ပတန်းဝင် က္ဖေျာီဖစ္ဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ် '' ဟုျေပာသည်။
ယခင္နွစ္ကျမန္မာနိုင်ငံအတြင်း က္ဖောီစေ့တန္ခ်ိန် ၈,ဝဝဝ ကေ်ာ် ထုတ္လုပ္နိုင္ခဲ့သ္လောည်ျးပည္ပနိုင်ငံမ်ား သို့ အထူးတန်းဝင် က္ဖောီစေ့ တန္ခ်ိန် ၃ဝဝ ခန့်သာ တင္ပို့နိုင္ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကျောဖီသငျတနျး တကျရနျ ဘယျလို ဆကျသှယျရမလဲ..
by May. would to know how to contact to Coffee special technology Training. at March 03 2019
by Jaw Doi Nan at February 22 2019